सर्भर को सदस्य पटक-पटक "Dedik" को अवधारणा भेटे। यो के हो? यो अवधि जो "समर्पित सर्भर" अर्थ समर्पित सर्भर को कमी, बाट लिइएको हो। यो समीक्षा यो आवश्यकता के हो र यो कहाँ प्रयोग गरिन्छ भनेर भन्नेछु।
समर्पित सर्भर - जहाँ ग्राहक एक बिल्कुल स्वायत्त शारीरिक उपकरण चार्टर भइरहेको छ होस्टिंग सेवा प्रदान गर्न छ। होस्टिंग यस प्रकारको चलिरहेको आवेदन, एउटा कारण वा अर्को लागि, वर्तमान एकसाथ एउटै मिसिन अन्य परियोजनाहरू संग हुन सक्छ जो को मामला मा अधिकतम छ। वा उनीहरूले स्वास्थ्य कायम राख्न र विकास गर्न सक्षम हुन स्रोत निर्धारण को एक ठूलो संख्या आवश्यक हुन सक्छ।
विपरीत समर्पित सर्भर भर्चुअल
समर्पित सर्भर - यो सर्भर लागि हो? अक्सर, उपकरण को यस प्रकार डाटा सेन्टर मा एक विशेष प्राविधिक मंच मा स्थित छ। यसको मुख्य विशेषता - कन्फिगर र भाडादार सर्भर संचालन गर्न सबै अधिकार पूर्ण स्थानान्तरण। मालिक भाडामा उपकरण छ कि सबै हार्डवेयर र सफ्टवेयर गर्न निरपेक्ष पहुँच हुन्छ।
ग्राहक सञ्चालन प्रणाली चयन गर्न सक्नुहुन्छ, साथै समर्पित सर्भर सर्भर लागि सम्पूर्ण कन्फिगरेसन परिवर्तन। उहाँले परीक्षण वा मर्मतका कुनै पनि काम पूरा गर्ने अधिकार छ। यसरी अन्य सेवाहरू वा सर्भरमा हानि को कुनै जोखिम छ। अक्सर, अर्डर टाढैबाट BIOS र सफ्टवेयर व्यवस्थापन गर्न सक्षम मा, ग्राहक सर्भर साथै, KVM मार्फत पहुँच गर्न सक्षम छ।
निरन्तर सञ्चालन मा सर्भर अटुट पहुँच सुनिश्चित - कि Dedik को महत्वपूर्ण लाभ को एक। यो कस्तो अर्थ राख्छ? उदाहरणका लागि, केही जानकारी एक मिसिन मा स्थित छ भने पनि यसलाई मर्मत काम, वा यो जानकारी मिल्दा जुल्दा छैन पहुँच रोकन को मामला मा सर्भर अलग।
क्लाउड सर्भर भन्दा लाभ
सबै को पहिलो, समर्पित सर्भर द्वारा एक कम लागत विशेषता छ। क्लाउड समाधान को विशेषताहरु समान थप खर्च हुनेछ। सिद्धान्त मा, बादल-सर्भरले यो निष्क्रिय हुँदा समयमा स्रोतको लागत मा सम्भव सुरक्षित बनाउँछ। तर व्यवहार मा यो लगभग गर्दैन छ। उदाहरणका लागि, ब्याकअप बनाउन कार्य राती काम गर्दै छन्। ठूलो-मात्रा परियोजनाको लागि एक प्रक्रिया जस्तै आठ घण्टा वा बढी लिन सक्छ।
क्लाउड समाधान अर्को बेफाइदा नेटवर्क र डिस्क subsystems बहु तहहरू, साथै virtualization मा स्रोतहरूको एक अतिरिक्त प्रवाह छ। यो उपकरण दक्षता मा सजिलै देखिने प्रयास छ। विशेष गरी एक भारी कर्तव्य परियोजनाहरुमा सजिलै देखिने।
सुरक्षा - ज्यादै नकारात्मक क्लाउड-सर्भर। हार्ड ड्राइव र स्मृति मा डाटा पहुँच, ग्राहक बाहेक, मालिकको पनि बादलमा छ। यो एक खतरा गर्न सक्नुहुन्छ।
आवेदन समर्पित सर्भर
अक्सर उपकरण को यस प्रकार मा-लाइन विशाल गणनाको स्रोतको मात्र होइन अस्तित्व र हार्डवेयर मा उच्च माग, तर पनि विभिन्न भागबाट साइट प्रवेश खेलाडीहरूलाई एक ठूलो संख्या को साथ उपस्थिति implies जो, कम्प्युटर खेल पहुँच लागू गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक छ ग्रह। साथै, खेल सबै डाटा तपाईं सुरक्षित गर्न आवश्यक छ।
टाढाको गेमिङ खाता को अभाव मा, मर्मतसम्भार र प्राविधिक काम धेरै खेल सर्भर संयोजन गरेर वा समयमा kickbacks सम्भव मात्र होइन सबै खेल डाटा सुरक्षित गर्न, तर पनि खेलाडीहरू बीच सर्भर को दर्जा जुटाउने छ।
могут быть использованы не только для того, чтобы уменьшить нагрузку на какой-то определенный компьютер. कुनै पनि विशेष कम्प्युटरमा बोझ कम गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ मात्र स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम मा उपकरण bsluzhivayuschie समर्पित। नेटवर्क सुरक्षा परियोजना सुनिश्चित लागि पनि Dedik जिम्मेवार छन्। यो कस्तो अर्थ राख्छ? कुनै पनि ह्याकर वा DDOS-आक्रमण भने, जहाँ डेटाबेस छुट्टै मिसिन मा स्थित छ मामला मा, महत्वपूर्ण जानकारी प्रभावित हुनेछ। स्रोत को सम्पत्ति लगे जो ह्याकर, कुनै पनि महत्वपूर्ण क्षति को परियोजना राख्न सक्षम हुने छैन।
Dedik सर्भर कुनै पनि अनलाइन खेल को एक सर्भर, सकिन्छ जसमा मात्र सर्भर-पक्ष रन, र वर्ण र खेलाडीहरू डाटा अर्को मिसिन मा स्थित बारेमा। अक्सर, यदि युनिक्स सञ्चालन प्रणाली संग उपकरणको संस्करण प्रयोग को एक संभावना छ, विकल्प यसलाई पर्छ। यो सस्ता र प्रयोग गर्न छरितो छ।
पनि समर्पित सर्भर उच्च लोड गर्न सम्बन्धित वेबसाइट पाहुना गर्न प्रयोग गरिन्छ।
कसरी समर्पित सर्भर जडान गर्न? सजिलो तरिका विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम मा बनाएको छ कि एक उपयोगिता प्रयोग छ। यसलाई "एक रिमोट डेस्कटप जडान" भनिन्छ छ। यो एक कार्यान्वयन फाइल mstsc.exe को रूप मा ओएस को प्रणाली फोल्डर मा स्थित।
धेरै सहज जडान छैन। यो टाढाको सर्भर, प्रयोगकर्ता नाम, जो अन्तर्गत जडान गर्न प्रयोग गरिनेछ, र पासवर्ड को आईपी-ठेगाना प्रविष्ट गर्न प्रेरित गरिनेछ। जडान हुन्छ को पुष्टि क्लिक पछि।
त्यहाँ पनि रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल प्रयोग उपकरण पनि छन्, तर तिनीहरू लाभ को एक नम्बर छ। यो डाटाबेस, भण्डारण Dedikov क्रमबद्ध, टिप्पणी गर्ने र अन्य सुविधाहरू हुन सक्छ। सबै भन्दा प्रसिद्ध समर्पित सर्भर बुक र RMS जडान गर्न उपकरण हो। तिनीहरूले धेरै राम्रो प्रणाली प्रशासकलाई मदत गर्दै हुनुहुन्छ। जब जोडिएको सुरक्षा बारे मा भूल छैन र एउटा VPN वा प्रोक्सी प्रयोग गर्नुहोस्।
समर्पित सर्भर सिर्जना
धेरै ग्राहकहरु कसरी समर्पित सर्भर सिर्जना गर्न इच्छुक छन्। तपाईंले यसलाई स्थायी रूपमा नेटवर्कमा जडान कि एक भौतिक शक्तिशाली कम्प्युटर हो भनेर बुझ्न छन्। यो आफैलाई सिर्जना गर्न सम्भव छ? न त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्:
तपाईं लगातार विभिन्न ठाउँमा देखि सर्भर पहुँच आवश्यक छ भने, यसलाई आफ्नो कम्प्युटर बनाउन एकदम सम्भव छ। यो गर्न, तपाईंले सञ्जालमा यसको स्थायी जडान हेरचाह गर्न आवश्यक छ। र उहाँले पर्याप्त शक्तिशाली हुनुपर्छ। यो पोर्ट 2289, तपाईं रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल जडान गर्न सक्छन् जो मार्फत खोल्न आवश्यक छ। समर्पित आईपी-ठेगाना - अर्को सर्त।
निर्माण सर्भर आदेश, ग्राहकका लागि भाडा सर्भर प्रदान गर्नेछ कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनी बाट आदेश गर्न सकिन्छ। प्रयोगकर्ता आईपी-ठेगाना साथै प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड हुनेछ। यो विकल्प अधिक महंगा, तर पनि थप विश्वसनीय छ।
सबैभन्दा एक महंगा विकल्प - भौतिक सर्भर को खरीद, र त्यसपछि कुनै पनि डाटा सेन्टर मर्मतका मा स्थापना गर्नुहोस्।
तयारी समर्पित सर्भर
अर्डर समर्पित सर्भर प्राप्त गर्न, तपाईं यो सेवा प्रदान गर्दछ वेब होस्टिंग कम्पनी सम्पर्क गर्नुपर्छ र तपाईंको आवेदन अनलाइन वा लिखित पेस गर्नुहोस्। समीक्षा निम्न इच्छित कन्फिगरेसन र सफ्टवेयर निर्दिष्ट गर्न आवश्यक हुनेछ। सबै गरिन्छ पछि, ग्राहक उपकरण र संकेत एक सम्झौता प्राप्त गर्दछ।
केही कम्पनीहरु निर्दिष्ट अवधि लागि समर्पित सर्भर निःशुल्क पहुँच प्रदान गर्नुहोस्। ग्राहक लागि डेमो संस्करण एक प्रकारको समर्पित सर्भर को फाइदा र बेफाइदा मूल्याङ्कन गर्न सक्षम हुन। शब्द को अन्त मा तपाईं या त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर शुल्क, वा सेवा इन्कार गर्छन्।
माथिको, Dedik देखि स्पष्ट हुन्छ रूपमा - यो सिर्फ एक सर्भरको। यसको विशेषता विशेषताहरु - भाडामा ग्राहक उपकरण दिने। तपाईं एक उच्च लोड संग परियोजनाहरुमा काम गर्न छ भने, त्यसपछि समर्पित सर्भर सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ। यसको नियन्त्रणको लागि विशेष कार्यक्रम छन्। Dedikov चासो सबै अनलाइन खेल।
जासूस USB फ्लैश ड्राइव वा कसरी गोप्य अर्को कम्प्युटरबाट फोटो चोरी।
यो के हो: HEVC? नयाँ कोडेक को प्रमुख सुविधाहरू
PHP: नियमित अभिव्यक्ति, समारोह preg सबै मेल
निर्देशन: कसरी विन्डोज एक डिस्क विभाजन गर्न 8
किशोरकिशोरीहरूको लागि धूम्रपान को हानि के हो?
सीतनिद्रा krasnouhih कछुवा। के तपाईं जान्नु आवश्यक?
के पानी यदि कान मा हुन्छ
बाइक Kellys: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों, प्रकार र मूल्यांकन